Haddii Aad Calaamadahan Ku Aragto Taleefankaaga Gacanta Waxa Aad Ogaataa In Ay Cidi Ku Basaasayso | Salaan Media
Hargaysa (Salaanmedia.com)_ Taleefanka gacantu waxa uu ka mid noqday halbawlaha nolol maalmeedka qofka, sidaa awgeed qof kasta oo xiisaynaya in uu xado aqoonsigaaga, in uu basaaso xogtaada gaarka ah ama in uu xisaabaadkaaga maaliyadeed u dhaco, bartilmaameedkiisa koowaaad waa in uu taleefankaaga gacanta jabsado.
1 Internet ka (DATA) oo uu isticmaalkiisu aad kor ugu kaco
2 Baytariga oo uu si degdeg ah dabku uga dhammaado
3 Taleefanka oo kululaada
4 Barnaamijyo cusub oo aad ku aragto shaashadda taleefankaaga gacanta
5 Taleefankaaga oo iskii u tegeya qaybta laalinta muuqaalka tooska ah (Live Video)
Haddii aad mar uun aragto
taleefankaaga oo adiga oo aan dooran doonaya in uu adeeggan iskii u bilaabo ama bilaabayba. Waxa aad ogaataa in ay jirto cid doonaysa in ay kamaradaada adiga kugu basaasto. Si aad u sii hubiso, marka aad xaaladdan aragto waxa aad iyagana dib u hubin kartaa xaaladihii aynu hore u soo sheegnay oo haddii aad iyagana aragto kuu noqonaya marag kale oo kuu sii caddaynaya in lagu jabsaday.
6 Adeeggii taleefankaaga casriga a (Smart Phone) oo hoos u dhacay
7 Taleefankaaga oo cid iska garaaca ama farriin iska dira
8 Barnaamijyo iyo daaqado isk furmaya
9 Haddii aad hesho Farriimo digniin ammaan ah
10 dhawaaq aan dabiici ahayn oo aad ka dhex maqasho taleefankaaga
11 Taleefankaaga oo aad xidhi kari weydo
12 Farriimaha Email ka oo lagaa xidho